China MEDALS MEDALS ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Kingtai
Site na ọtụtụ ihe Omume nke Mmasị na mkpa maka Awards metụtara ndị na-achịkọta ego metụtara ọtụtụ n'ime isiokwu ndị a, anyị ewebatala akara nke trophies mmata na akara nrite. Enwere ike iji ha mee ihe na nke ọ bụla n'ime Universal Kit anyị na-ere ọnụ ọgụgụ n'otu n'otu. Anyị na-enyekwa nsonye ụdị nsonye anyị ahaziri ọhụrụ na agba ọhụrụ.
Maka ihe kpatara ma ọ bụ ọrịa ihe omume gị nwere ike ịbụ maka, tụlee onyinye na nrite anyị maka mmata. Ndi a medal-themed medals dị ukwuu maka ịmara ọrịa kansa ma ọ bụ ịmara banyere ọrịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-akpata. Enwere ike bipụta akara ngosi banyere ọrịa kansa n'ọbara n'ọtụtụ agba nke gosipụtara agba gị na ihe kpatara ya. Ọ dị mma maka agbụrụ na egwuregwu ndị ọzọ, jiri akara aka gị hazie akara mmụta gị. Kpọọ anyị ma ọ bụrụ na akọwapụtaghị agba gị dị ka nhọrọ na anyị ga-eme ka ọ rụọ ọrụ. Pịa na akara ngosi agbụrụ maka mmata n'okpuru iji lelee ọnụ ala ego.
Schoppy's Awareness Ribbon Awards gosipụtara rịbọnụ na ịhọrọ agba gị. A na - ejikọ Ribbons na-eme ka a mata ihe dị iche iche. Awardsgwọ ndị a dị mma ịkele onye nyere onyinye ma ọ bụ onye nhazi maka nzukọ ọrụ ebere gị ma ọ bụ nye ndị mmeri mmeri.
Nke gara aga: Ihe nrite nrite